The Church of Almighty God - Izinhlelo zokusebenza ku-Google Play
reviewsUmsebenzi wami we-Play
Inqubomgomo Yemfihlo • Imigomo Yesevisi
Mayelana nalolu hlelo lokusebenza
IBandla LikaNkulunkulu uSomandla selikhiphe i-app yalo kamakhalekhukhwini njengomzamo wokusiza abantu abavela kuzo zonke izinkalo zempilo abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu ukuba bafunde umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Iqukethe izinhlobonhlobo zezincwadi, imibhalo, izihlabelelo, namavidiyo kwamahhala. Simema abantu bayo yonke imikhakha ukuba bafake le-app ukuze baphenye indlela eyiqiniso.
Ngalokho okucebile ekuqukethe, i-app yeBandla likaNkulunkulu uSomandla izokusiza ikuqondise ukuba ulandele izinyathelo zeWundlu futhi uthokozele ukondla kwamanzi okuphila.
Ivangeli: Izigaba zibandakanya Okukhethiwe Kwamazwi KaNkulunkulu, Indlela Yokwazi UNkulunkulu, kanye namaqiniso evangeli ahlukahlukene, okukusiza ukuba wazi umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina.
Ukwambula Iqiniso: Lesi sigaba sidalula amanga futhi siveze iqiniso, sikusize ubone ngale kwamanga nenkohliso kaSathane.
Ubufakazi: Lapha ungathola ubufakazi babantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo behlwithelwa phezulu phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nobokusindiswa, ubufakazi bokucindezelwa nokuhlupheka bese ekugcineni beba ngabanqobi, nokunye okuningi, ukuze usizakale kangcono ukwazi uthando lukaNkulunkulu nensindiso.
Ukholo Nokuphila: Ubufakazi bobuKristu beqiniso kusukela ekhaya, emsebenzini, nokufundisa izingane zabo kanye neMibuzo Nezimpendulo okunhlobonhlobo mayelana nokholo kuzokusiza ukuxazulula ukudideka nezinkinga obhekana nazo okholweni lwakho nasempilweni yansuku zonke.
Dawuniloda izincwadi zamazwi kaNkulunkulu nezincwadi zokuhlangenwe nakho kwamaKristu kanye nobufakazi ngokuthinta nje okukodwa ukuze uqale ukuthokozela lokhu kondleka kwempilo.
NgeModi Engaxhunyiwe Ku-Inthanethi ungafunda amazwi kaNkulunkulu ukuze ukwazi ukusondelana noNkulunkulu noma ukuphi nanganoma yisiphi isikhathi.
Yenza ngokufisa kwakho isikhombikubona esikuphatha kahle ngamasethingi azwana nawe anjengokokunyakazisa ikhasi ngokuliphendula, usayizi wefonti, nombala wesizinda.
Buka amavidiyo akamuva ngokuthinta nje kanye.
Izifundo zamazwi kaNkulunkulu, amabhayisikobho evangeli, imisebenzi yamakhwaya, amavidiyo omculo wezihlabelelo, ukwethulwa kwemidlalo, nokunye okuqukethwe okunothile konke kukulindele, kulungele ukukuqondisa ukuba ufunde ukubonakala nomsebenzi kaNkulunkulu, nokuba uthokomale othandweni nasensindisweni kaNkulunkulu.
Emtapweni Wolwazi Wokulalelwayo ungalalela izingoma ezintsha zombuso noma nini futhi noma kuphi.
Ngamaqoqo ahlukahlukene okungakhethwa kuwo, ungathola kalula izihlabelelo ozithokozelayo.
Yakha umtapo wolwazi wokulalelwayo ongaxhunyiwe ku-inthanethi, dawuniloda futhi ungamele amathrekhi amaningi ngesikhathi esisodwa ukuze ukuthokozele kangcono lokhu ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Londoloza futhi wabelane ngezihlabelelo ozithokozelayo ukuze uzilalele futhi udumise uNkulunkulu noma kuphi, noma nini.
Izifundo zamazwi kaNkulunkulu zikusiza ukuba uqonde uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizi-6000 kanye nentando Yakhe yokusindisa isintu.
Izincomo zinezihlobonhlobo zezihloko ongakhetha kuzo ezifaka indlela yokwamukela iNkosi, indlela eya embusweni wezulu, nemfihlakalo yendlela yokuphila okuphakade.
Ngethuluzi lokuthungatha uhlelo ungakuthola kalula lokho okufunela imithandazo yakho.
Beka izikhumbuzo zemithandazo ukuze zikukhumbuze lapho sekuyisikhathi sokuqala imithandazo yakho yansukuzonke.
Uma ubhalisela i-akhawunti ungangena ngemvume ngokuchofoza kanye nje bese ufunda kalula amanothi akho, amabhukumaka, nokunye okwakho okuqukethwe kunoma iyiphi idivayisi.
Vulela izaziso ezizingenelayo ukuze uthole zonke izibuyekezo zakamuva kumahubo, amavidiyo, izindaba ezilandwayo, nezinhlelo zemithandazo.
Ezingxoxweni ezibukhoma sihlale sikhona ukuze silalele izwi lenhliziyo yakho futhi sikusize uthole izimpendulo.
Itholakala ngezilimi ezingama-28 ezahlukene emhlabeni wonke ukuze kube lula kuwena.
Sicela uxhumane nathi uma ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa.
Ukuphepha kuqala ngokuqonda ukuthi onjiniyela baqoqa futhi babelane kanjani ngedatha yakho. Ubumfihlo bedatha nezinqubo zokuphepha zingahluka kuye ngokusebenzisa kwakho, isifunda, nobudala. Unjiniyela unikeze lolu lwazi futhi angalubuyekeza ngokuhamba kwesikhathi.
Ayikho idatha eyabiwe nezinkampani zangaphandle
Funda kabanzi mayelana nendlela onjiniyela abaveza ngayo ukwabelana
Le app ingaqoqa lezi zinhlobo zedatha
Ulwazi lomuntu siqu, Imilayezo nabanye abangu-4
Idatha ibetheliwe lapho ithunyelwa
Ungacela ukuthi leyo datha isulwe
Izilinganiso nezibuyekezo ziqinisekisiweinfo_outline
Oxhumana naye wonjiniyela
Okuningi ngo-The Church of Almighty God
Izinhlelo zokusebenza ezifanayo
Inqubomgomo yokubuyisa imali
Mayelana ne-Google Play
i-United States (isiZulu)